Mon, Jul 6, 2020 at 4:42am
एजेन्सी, बैशाख २५ आफूलाई माया,र काममा साथ दिन बलिउड अभिनेत्री सनी लियोनीका पति डेनिबियर बीबरले एउटा नयाँ कुरा सार्वजानिक गरेका छन् । बलिउड अभिनेत्री सनी लियानीले दक्षिण अफ्रिकामा नयाँ पति रोजेको उनका पति (डेनिबियर बीबरले) बताएका छन् । सनीको बायोपिक ‘करनजीत कौरः द अनटोल्ड स्टोरी अफ सनी लियोनी’का फिल्मका लागि उनले दक्षिण अफ्रिकी अभिनेता मार्क बकनरलाई रोजेकी हुन् । सनी लियोनीका पतिको..
नगरकोट, २५ वैशाख रबरको साँचोमार्फत रेजिनका सजावट एवं उपहारका वस्तु बनाउने तालीमतर्फ युवा आकर्षित भएका छन् । रबरको साँचो बनाउने र त्यसैको माध्यमबाट रेजिन प्रयोग गरी क्युरियोका वस्तुसमेत बनाउन सकिने भएपछि युवा सो तालीमप्रति आकर्षित भएका हुन् । घरेलु तथा साना उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र त्रिपुरेश्वरद्वारा सञ्चालित १५ दिने उक्त तालीममा भक्तपुरका २६ युवा सम्मिलित छन् । तालीममा १० जना युवा र १६ युवतीले..
प्रियंकाको हातमा अर्को हलिउड प्रोजेक्ट, यस स्टारसँग गर्दैछिन् शो
एजेन्सी, बैशाख २४ बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले चाँडैने अर्को अहिउड प्रोजेक्ट गर्नेछिन् । प्रियंकाले चाँडैनै हलिउड अभिनेताको साथमा काम गर्दै गरेकी नजरमा देखिने छिन् । यो च्याट शो फर्मेटमा हुनेछ । खासमा प्रियंकाले हलिउड अभिनेता विल स्मीथको साथमा टक शोको होस्ट गर्दैछिन् । यो शोमा अभिनेत्री प्रियंकाले रियल लाइफ हिरोजको बारेमा कुराकानी गर्नेछिन् । वील स्मीथको साथमा यो उनको युट्युभ सिरिज हुनेछ ।..
भारतीय अभिनेत्री करिष्मा कपूरको काठमान्डौंमा करिस्मा
काठमान्डौं, २४ वैशाख बलिउड अभिनेत्री करिष्मा कपूर नेपाल आइपुगेकी छिन् । एक ब्यापारीक प्रयोजनका लागि उनी भारतबाट सोमबार बिहान ८ः३० मा नेपाल आइपुगेकी हुन् । मेरिगोल्ड सयपत्री ज्वेलर्सको ग्रान्ड ओपनिङ सेरेमोनीमा उनलाई विशेष अतिथिका रुपमा निमन्त्रणा गरीएको हो । त्यसैको लागि उनी नेपाल आउन लागेकी हुन् । उनले मेरिगोल्ड ज्वेलर्सको दरबारमार्गमा रहेको नयाँ शोरुमको समुद्घाटन गर्ने छिन् । उद्घाटनका लागीमात्र १६ लाख भारु..
काठमाडौँ, २४ वैशाख : मुलुकमा स्वदेशी गीत तथा संगीतको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ‘नेपाल लोक आइडल २०७५’ का लागि प्रथम, दोस्रो र तेस्रोलाई क्रमशः रु ३० लाख, रु १५ लाख र रु १० लाख पुरस्कार घोषणा गरिएको छ । सार्थक डिजिटल म्युजिक प्रालिको आयोजनामा हुने उक्त कार्यक्रममा आगामी साउनदेखि सातै प्रदेशमा गायक छनोट प्रक्रिया शुरु गरिने आइडलका संयोजक जीवन पन्तले जानकारी..
एजेन्सी, बैशाख २३ दक्षिण भारतमा नायक तथा नायिकाको संंख्या पछिल्लो समय अत्याधिक मात्रामा बढेको छ । तेलुगु फिल्मकी सुपरस्टार काजल अग्रवालकी बहिनी निशा हिरोइन भन्दा पनि निकै राम्री छिन्, दिदीभन्दा निकै राम्री भएको कारण उनी निकै चर्चामा आएकी छन् । निशा ३२ वर्षकी अविवाहित दिदि काजल भन्दा निशा ४ वर्ष कान्छी हुन् । उनले २०१० मा फिल्मी करिअर सुरुवात गरेकी थिइन् ,भने २०१४ मात्र..
काठमाडौँ २२, बैशाख : खेलकुदको माध्यमबाट नेपाललाई विश्वमा चिनाउन मद्दत पुऱ्याएको भन्दै नेपालका किर्तिमानी धावक बैकुण्ठ मानन्धरलाई सिड्नीमा सम्मान गरिएको छ । अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा आयोजना गरिएको पदयात्रा कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका मानन्धरलाई ओलम्पिक पार्कमा शनिबार नगद सहित सम्मान गरिएको हो । खेलकुदको माध्यमबाट नेपाललाई विश्वमा चिनाउन मद्दत पुऱ्याएको भन्दै २ हजार ५ सय डलर (करिब २ लाख रुपैया) सहित उनलाई सम्मान गरिएको..
अन्तत: सलमानलाई मिल्यो केहि हदसम्म राहत, अदालतले दियो सफाई !
एजेन्सी, वैशाख १९ बलिउडका ‘सुल्तान’ सलमान खानलाई जातिवादी टिप्पणीसम्बन्धी मुद्दामा सफाई पाएका छन्। सलमानसहित नायिका शिल्पा सेट्टीविरुद्ध अल्पसंख्यक जातिलाई होच्याएको आरोपमा पंजावको लुधियाना कोर्टमा परेको थियो । फिल्म ‘टाइगर जिन्दा है’को प्रमोशनका क्रममा अल्पसंख्यक जाति वाल्मिकी समाजलाई होच्याउने शब्द प्रयोग गरेको भन्दै परेको मुद्दा लुधियाना कोर्टले खारेज गरेको हो । सलमानलाई जातिवादी टिप्पणी मामिलामा राहत मिले पनि कालो हरिण मामिलामा राजस्थान हाई कोर्ट दोषी ठहर गरेको छ । दोषी ठहर सलमान अहिले जमानतमा जेल..
बाहुबलीकी 'देवसेना'को हट बिकिनी तस्वीर भयो एकाएक भाइरल, हेर्नुहोस् .....
एजेन्सी, बैशाख १६ फिल्म ‘बाहुबली–२’ रिलीज भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ। फिल्ममा अभिनेता प्रभासले बाहुबलीकोको अवतारमा आफ्नो सफताको झण्डा फहराएका थिए। फिल्ममा देवसेनाको नामबाट चर्चित भएकी अभिनेत्री अनुष्का शेट्टी पनि चर्चित अनुहारमा गनिन थालेकी छन्। त्यतिमात्र होइन, उनी बलिउडको पाँच करोडको क्लबमा पनि शामेल भएकी छन्। यो फिल्मपछि अनुष्काका फ्यान फलोइङको संख्यामा बृद्धि भएको छ। हामीले अनुष्कालाई सामान्यता साडी र सुट..
यी ५ कन्ट्रोभर्सी जसले ऐश्वर्या रायको करियर चुर्लुम्ब डुबायो, थाहा पाउनुहोस् कारणहरु !
एजेन्सी, बैशाख १४ चर्चित भारतिय अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चनले आफ्नो फिल्मी करियरको सुरुवात तमिल फिल्मबाट गेरकि थिइन् भने फिल्म ‘और प्यार हो गया’बाट बलिउडमा प्रवेश गरेकि हुन् । पर्दामा मात्रै नभएर पर्दा पछाडि पनि ऐश्वर्या विभिन्न सामाजिक काममा जुटिरहेकी हुन्छिन् । उनि विश्व सुन्दरीको ताज विजेता समेत हुन् । यसरि सबैको लोकप्रिय बनेकी ऐश्वर्या विभिन्न कारणले बेलाबेलामा विवादमा तानिएर समेत चर्चामा आउने गर्दछिन्..
जब फिल्म ‘कयामत से कयामत तक’ मा जुही चावलाले अमिरलाई किस गर्न अस्वीकार गरिन् !
एजेन्सी, बैशाख १३ बलिउड फिल्मको पर्दा जति रंगीन छ, त्यस पछाडिको किस्सा झन् रमाइला छन्। यस्तै एउटा किस्सा अमिर खान र जुही चावलाको फिल्म ‘कयामत से कयामत तक’ मा पनि छ। यो किस्सा फिल्मको शुटिङको सिनसँग जोडिएको छ। फिल्मको गीत ‘अकेले हैं तो क्या कम हैं’ को शुटिङका क्रममा जुहीले अमिर खानको गाला र निधारमा चुम्बन गनुपर्ने थियो। तर जुहीले चुम्बन गर्न..
बलिउडमा फ्लप 'सनाया इरानी' भारतीय टेलिभिजनमा सुपरस्टार !
एजेन्सी, बैशाख १२ सिरियलमा एकदमै चर्चा कमाउन सफल सनाया बलिउडमा भने जम्न सकिनन् । सनायाले नायक आमिर खानको फिल्म ‘फना’बाट सहायक भूमिकामा डेब्यु गरेकी थिइन् । फिल्ममा फ्लप सनाया टेलिभिजनमा भने सुपरस्टार भइकी छिन् । उनी पहिलो फिल्मा सफल भएका थिए तर उनको छोटो भूमिका भएको हुँदा त्यसको मुल्य भने हुन सकेनन्। फिल्म ‘फना’बाट डेब्यु गर्नुलाई सनाया आफ्नो करियर सबैभन्दा ठुलो भूल..
वीरगञ्ज, ११ वैशाख अभिनेता टाइगर श्राफ निकै लजालु छन् । उनी आफूसँगै अभिनय गरेका हिरोइनसँग कुराकानी गर्न पनि लजाउने गर्दछन् । तर, हालै उनले आफूभन्दा १६ वर्ष जेठी हिरोइनसँग डेटिङ जाने इच्छा जाहेर गरेका छन् । उनलाई हालै एउटा अन्तर्वार्तामा डेटिङ जान पाए कुन हिरोइन रोज्नुहुन्थ्यो भनेर सोधिएको थियो । त्यसमा उनले लजाउँदै ऐश्वर्या रायको नाम लिए । ऐश्वर्या टाइगरभन्दा १६ वर्ष..
कट्रिनाले रणबीरतर्फ हेर्दै ‘रक्सी पिएर आएको छौ कि के हो ?’ भनेपछि .....
मुम्बई,23 अप्रिल रणबीर कपुर र कट्रिना कैफ उनीहरुको नयाँ फिल्म ‘जग्गा जासूस’ को प्रामोशनमा जुटिरहेका छन् । यतिबेला मज्जाले हँसिमजाक गरिरहेको देखिएका छन् । ब्रेकअपपछि यो जोडीको पहिलो फिल्म हो तर प्रामोशनको क्रममा दुबैको केमेस्ट्री रोचक देखिएको छ । फिल्मको सुटिङका क्रममा दुबैबिच झगडा भएपछि फिल्मको सुटिङ नै केही समयका लागि रद्द गर्नुपरेको थियो तर अब प्रामोशनको क्रममा यो जोडीले आफ्नो ध्यान..
‘बिग बोस’को नयाँ सिजनमा सलमानको साथ दिँदै कट्रिना
काठमाडौँ, ९ वैशाख बलिउड अभिनेता सलमान खानले चौंथो सिजनबाट ‘बिग बोस’ को होस्ट गर्दै आएका थिए । उनको शैली १२ औं संस्करणसम्म आइपुग्दा दर्शकमाझ स्थापित भइसकेको छ । बीचमा एकपटक सलमानलाई सञ्जय दत्तले साथ दिएका थिए भने यो पटक पनि सम्भवतः सलमान एक्ला हुने छैनन् । उनीसँग एक महिला होस्ट पनि हुन सक्छिन् । यस्तोमा टेलिभिजनले होस्टिङमा पनि सलमानको जोडी बाँधिदिने तयारी गरेको हो ।..
करण जौहर फेरी विवादमा ! विद्या बालनलाई सोधे ‘यौन सम्पर्कपछि के गर्छौ ?’
एजेन्सी, बैशाख ७ करण जौहर एकाएक विवादमा तानिएका छन् । निर्माता, निर्देशक, कलाकार तथा एङ्कर समेत रहेका करणले एक लाइभ शोमा बलिउड हिरोइन विद्या बालनलाई सेक्सपछि के खान्छ्यौ भनेर प्रश्न गरेपछि बलिउडमा नयाँ तरंग सिर्जना भएको छ । करणको कार्यक्रम ‘करण कलिङ’मा विद्याले आफ्नो बेडरुमका धेरै गोप्य कुराहरु खुलासा गरिन्। करणले विद्यासँग बेडरुमका विषयमा रेपिड फायर सुरु गरे । यस क्रममा उनले बेडरुममा..
काठमाडौँ, ६ वैशाख भारतीय टेलिभिजन कलर्समा प्रसारण भएको सिरियल ‘नागिन’मा अभिनय गरेर प्रशिद्धी कमाएकी अभिनेत्री मौनी राय चाँडै बलिउड सुपरस्टार सलमान खानको चलचित्र ‘दबंग ३’ मा अभिनय गर्दै छिन् । रिलिज हुन बाँकी रहेको चलचित्र ‘गोल्ड’मा नायक अक्षय कुमारसँग अभिनय गरिसकेकी मौनीले ‘दबंग’मा सलमान सँग अभिनय गर्न लागेकी हुन् । ‘गोल्ड’ उनको ठूलो पर्दामा डेब्यु मुभि हो । ‘दबंग’मा मौनी सलमान..
एजेन्सी, ५, वैशाख सामान्यतय हेर्ने हो भने बिहे पछी धेरैजसो अभिनेत्रीहरु परिवार सम्हाल्नमै ब्यस्त रहन्छन । कतिपयले मन हुदा हुदै पनि श्रीमान र परिवारको साथ् नपाएकै कारण चलचित्र क्षेत्रबाट हात धोएर बसेका पनि छन् । तर बलिउड फिल्म ‘हेट स्टोरी २’ की अभिनेत्री सुरवीन चावलालाई भने चलचित्रमा अश्लिल सिन् दिदा पनि उनका श्रीमानलाई कुनै समस्या नहुने कुरा बताएकी छन् । उनले एक अन्तर्वार्ता..
सलमानले पाए विदेश यात्रा गर्ने अनुमति, नेपालसहित क्यानडा, र अमेरिका जानका लागि अनुमति मागे !
काठमाडौँ, ४ वैशाख बलिउडा चर्चित अभिनेता सलमान खानलाई अदालतले विदेश जान अनुमति दिएको छ । सलमानले आफ्नो अब आउने फिल्म सुटिङका लागि नेपालसहित क्यानडा, र अमेरिका जानका लागि अनुमति माग्दै निवेदन दिएपछि विदेश यात्रा गर्ने अनुमति पाएका हुन् । अदालतबाट अनुमति पाएसँगै अब सलमानले फिल्म सुटिङका लागि मे २५ देखि १० जुलाईसम्म विभिन्न चार देशको यात्रा गर्ने छन् । सलमानलाई सन्..
सलमान खानले २०१९ को इदमा प्रियंका र कटरिनासँग धूम मच्चाउने !
काठमाडौं, ३ वैशाख सलमान खान स्टारर फिल्म ‘भारत’का लागि स्टारकास्ट फाइन गरिएको छ । अली अब्बास जफरको निर्देशनमा बन्न लागेको फिल्ममा सलमानसँगै प्रियंका चोपडा र कटरिना कैफ समेत देखिनेछन् । अली अब्बासले ‘मेरे ब्रदर की दुलहन’बाट बलिउडमा डेब्यू गरेका थिए । उक्त फिल्ममा उनले कटरिनालाई लिएका थिए । त्यही बेला देखि कटरिना र अली असल साथी बनेका हुन् । त्यसपछि अलीले अर्को..
२ बैशाख, मुम्बई : माधुरीसँग २६ वर्षपछि अनिल कपुरको जोडी बाधिने भएको छ फिल्म टोटल धमाल मार्फत । बलिउडका सुपरहिट जोडी अनिल कपुर र माधुरी दीक्षित पर्दामा एकसाथ देखिने भएका छन् । फिल्म ‘टोटल धमाल’मा माधुरीसँग २६ वर्षपछि जोडी बाध्न लागेको कुराको जानकारी अनिलले ट्वीटरमार्फत दिएका छन् । इन्द्र कुमारले निर्देशन गर्ने फिल्मको शुटिङ्ग समेत सुरु भइसकेको छ । ‘शुटिङ्गको पहिलो दिन..
२०७५ मा एसइई उत्तीर्ण गर्ने करिश्मा मानन्धरको लक्ष्य, यस वर्ष कक्षा ९ को परीक्षा दिईन् !
काठमाडौं, ३० चैत । पछिल्लो समय करिश्मा मानन्धर आफ्नो कर्मका कारण चर्चित छिन्। उनी आफ्नो पेसा व्यवसायभन्दा अन्य कर्मका कारण चर्चामा आएकी हुन् । चलचित्र अभिनय र निर्माणमा लागेर नाम कमाएकी करिश्मा मानन्धर अहिले नयाँ शक्ति पार्टी नेपालसँग आबद्ध छिन् । पार्टी राजनीतिमा लागेपछि उनको चलचित्र अभिनय करिब करिब बन्दको स्थितिमा पुगेको छ । तैपनि उनी चलचित्रसँग सम्बन्धित गतिविधिमा सहभागी भने..
कमेडियन कपिल शर्माको टेलिभिजन शो ‘फेमिली टाइम विथ कपिल शर्मा’ सधैंका लागि बन्द
मुम्बई, २९ चैत कमेडियन कपिल शर्माको ‘फेमिली टाइम विथ कपिल शर्मा’ नामक टेलिभिजन शो सधैंका लागि बन्द हुने भएको छ । समाचार एजेन्सीले उल्लेख गरेअनुसार सोनी च्यानलले ३ एपिसोड प्रसारण गरेपछि कपिलको शो बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘कपिलको अब्यवसायिक रवैयाको कारण च्यानलले कार्यक्रम बन्द गर्ने निर्णय गरेको’ भारतका बिभिन्न मिडियाले उल्लेख गरेका छन् । यतिसम्म कि कपिलको फोन स्वीचअफ थियो ।..
२१ औँ पुष्प मेला यही चैत ३० देखि वैशाख ३ सम्म भृकुटीमण्डपमा हुने
काठमाडौँ, २८ चैत : पुष्प व्यवसायको विकास र विस्तारका लागि यही चैत ३० देखि आगामी वैशाख ३ सम्म यहाँ पुष्प प्रदर्शनी २०१८ हुने भएको छ । फ्लोरिकल्चर एशोसिएशन नेपालले मंगलबार यहाँ गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ‘स्वच्छ वातावरण तथा आर्थिक समृद्धिका लागि पुष्प व्यवसाय’ भन्ने मूल नाराका साथ भृकुटीमण्डपमा मेला हुन लागेको जनाएको छ । मेलामा मौसमी फूल, आलङ्कारिक बोटबिरुवा, सभा सम्मेलनका लागि प्रयोग..
जेलबाट बाहिरिएपछि सलमानले पहिलो पटक भावुक ट्वीट गर्दै के भने ?
काठमाडौं, २७ चैत कालो हरिण मारेको मामलामा पाँच बर्षको सजाय सुनाइएपछि सात अप्रिलमा जमानतमा रिहा भएका सलमानले पहिलो पटक सार्वजनिकरुपमा बयान दिएका छन् । उनले आफ्नो ट्वीटरमा इमोशनल पोस्ट गर्दै फ्यानलाई धन्यवाद दिएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘मेरो तर्फबाट ती सबैलाई धन्यवाद, जसले मलाई साथ दिए र म प्रति विश्वास राखे । सबैलाई धन्यवाद छ की जटिल समयमा पनि मलाई माया..
जोधपुर कोर्टले धरौटीमा रिहा गरेसँगै जेठ १२ मा सलमान नेपाल आउँदै !
काठमाडौँ, २६ चैत बलिउड अभिनेता सलमान खान जेठमा नेपाल आउने पक्का भएको छ। शनिवार जोधपुर कोर्टले धरौटीमा रिहा गरेसँगै आइतबार उनको नेपाल दबंग टुरको नयाँ मिति घोषणा गरिएको हो । नेपालस्थित आयोजक ओडीसी इन्टरटेनमेन्टलाई मुम्बईमा रहेको जेए इभेन्ट्सले पठाएको पत्रमा मे २६ तारिख अर्थात् जेठ १२ गते सलमानको दबङ टूर नामक सो आयोजनाका लागि निश्चित गरिएको उल्लेख छ । उक्त पत्र ओडिसीले..
नाङ्गै सुत्न रुचाउने बलिउडका यी नायिकाहरु, थाहा पाउनुहोस् !
काठमाडौँ, २५ चैत धेरैको भनाई छ, राती नांगै सुतियो भने सपना राम्रो देखिन्छ । कोहि-कोहि व्यक्तिहरुको शौख नै हुन्छ राती नांगै सुत्ने । बलिउड पनि यो कुराबाट टाढा छैन । ज्याकलिन फर्नान्डेजले अन्तरवार्तामा आफूलाई नांगै सुत्न मन लाग्ने बताएकी थिईन् । यी नायिकाले आफू प्रायः नांगै सुत्ने गरेको बताउँछिन् । पद्यालक्ष्मी पनि आफू राम्रोसंग निदाउन नांगै सुत्ने गरेको बताउँछिन् । मोडेल, लेखक,..
ओस्कार 2018: तस्वीरहरुमा हेर्नुहोस् 'रेड कार्पेट'मा सुपरस्टारहरुको जादु
काठमाडौँ, २३ चैत : 90औं एकाडेमी अवार्डमा जब 'रेड कार्पेट'मा सुपरस्टारहरुको मेला लाग्यो तब रमितेहरुको होस् उड्यो ! हेर्नुहोस् एकाडेमी अवार्डको झलकहरु : फिल्म 'गेट आउट' की अभिनेत्री अलिसन विलियम्स 'रेड कार्पेट'मा तहल्का मच्चाउने पहिलो स्टार थिईन् जहाँ विलियम्सले यसरी आफ्नो गहनाको प्रदर्शन क्यामेराको अगाडी गरिन् स्पाइडरम्यान चलचित्रमा आफ्नो जादु देखाईसकेका टम ह्लैंड उक्त समारोहमा यसरी देखापरे सन् 2012 मा ओस्कार जितिसकेकी लुपिता न्योंगो चम्किलो आउटफिटमा..
बलिउड अभिनेता सलमान खानलाई पाँच वर्ष जेल सजाय, बिहीबार नै केन्द्रीय कारागारमा !
काठमाडौँ, २२ चैत । बलिउड अभिनेता सलमान खान धेरै चर्चामा रहने गर्दछन् । तर अहिले उनि निकै गहिरो संग फसेका छन् । बलिउड अभिनेता सलमान खानले हरिण मारेको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै भारतीय अदालतले पाँच वर्षको जेल सजायको फैसला सुनाएको छ । कालो हरिणको सिकार गरेको २० वर्ष पूरानो मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै बिहीबार जोधपुर अदालतले सलमानलाई दोषी ठहर गर्दै पाँच वर्षको जेल..
Results 913: You are at page 25 of 31